स्पोन्सर पाउन सहारा पोखराको टुर्नामेन्ट जस्तो जेनुन कुरा हुनुपर्छ : कुमार गुरुङ अध्यक्ष, सहारा यूके | Everest Times UK
स्पोन्सर पाउन सहारा पोखराको टुर्नामेन्ट जस्तो जेनुन कुरा हुनुपर्छ : कुमार गुरुङ अध्यक्ष, सहारा यूके
नेपाल पुगेर फिजिकल्ली आहा रारा गोल्डकपमा सहयोग गर्नु नै ठूलो कुरा हो
नेपालको चर्चित फुटबल प्रतियोगिता आहा रारा गोल्डकप १८ औं संस्करण फागुन २२ देखि चैत १ सम्म पोखरा रंगशालामा हुँदैछ । ‘खेलकुद विकासमा सहकार्य गरौं, पोखरालाई खेलकुद पर्यटन सहरको रुपमा स्थापित गरौं’ भन्ने उद्देश्यसहित सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको हो । प्रतियोगितामा नेपाली र विभिन्न देशका क्लबले भाग लिनेछन् । प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न झन्डै करोड लागत अनुमान आयोजकको छ । सहारा क्लबले आयोजना गर्ने च्यारिटी कार्यक्रम, क्लबमा आश्रित बालबालिकाको सहयोग, भवन निर्माण, अक्षय कोष निर्माणमा सहारा यूकेले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यस सिजनको आहा रारा गोल्डकपमा सहारा यूकेको भूमिका र अन्य विविध विषयमा अध्यक्ष कुमार गुरुङसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि पूर्ण गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आहा रारा गोल्डकपमा सहारा यूकेले कुन रुपमा भूमिका खेल्दै छ ? १८ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप टुर्नामेन्ट मार्च ५ देखि १४ तारिख (फागुन २२ देखि चैत १ गते) सम्म पोखरा रंगशालामा हुँदैछ । यसमा सहारा यूके प्रायः गरी सधैं सहयोग गर्दै आएको छ । हुन त कतिलाई सहारा क्लबबारे थाहा नहुन सक्छ, यो हाम्रो केन्द्र हो । त्यसका सहारा यूके, सहारा हङकङ, सहारा अस्टे«लिया गरी तीनवटा ब्रान्च छन् । सहारा क्लब पोखराले हरेक वर्ष गर्ने मेजर टुर्नामेन्ट आहा रारा गोल्डकप हो । त्यो टुर्नामेन्टमा हामी सहारा यूके, सहारा हङकङ, सहारा अस्टे«लिया गएर सहयोग दिने काम गर्छौंं । त्यहाँ (नेपालमा) हामी गइसकेपछि याज टिम भएर काम गर्छौं । हामीले फाइनान्सियल सपोर्टदेखि ट्रफी लगायतमा सहयोग दिइरहेका छौं । व्यसिकल्ली नेपालमा गएर बैठक गर्ने, त्यहाँ सहारा क्लब पोखराका पदाधिकारी, कार्यसमिति र अग्रजहरुको सल्लाहअनुसार सहयोग दिने गरिराखेका छौं ।
आहा रारा गोल्डकप कहिलेदेखि सुरु भयो, यो कस्तो खालको प्रतियोगिता हो ?
आहा रारा गोल्डकप अहिले १८ वर्षमा खेलाउँदै छौं । त्यसअघि सहारा क्लब पोखराले एक वर्ष क्याराभान टुर्नामेन्ट आयोजना गर्नुभयो । त्यसपछि प्रायोजक भेटिएकोले नाम परिवर्तन गरेर आहा रारा गोल्डकप राखिएको हो । क्याराभान गोल्डकपलाई जोड्ने हो भने सहाराले निरन्तर टुर्नामेन्ट गरेको १९ वर्ष पुगेको छ । यो प्रतियोगितामा नेपालका ए डिभिजन क्लबहरु, अन्तर्राष्ट्रिय टोलीहरु सहभागी हुन्छन् ।
बाहिर भन्नाले कुन कुन देश ?
यस वर्ष भारतबाट खेलाडी सहभागी हुँदैछन् । जापानबाट पनि सहभागी हुने कुरा थियो । विश्वव्यापी रुपमा महामारी पैmलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण जापानका खेलाडी नआउने भन्ने बुझियो । तर पनि १० वटा टिमले भाग लिँदैछन् । जसमा विदेशी क्लब, ए डिभिजन क्लब, मोफसलका टिम र आयोजक सहारा क्लब पोखरा छन् । गएको वर्ष क्यामरुन, भारत लगायत देशले भाग लिएका थिए ।
टिम १० वटा तर खेल अवधि १२ दिन राखिएको छ, कसरी खेलाइन्छ ?
यो नकआउट सिस्टममा खेलाइने गोल्डकप हो । फाइनलमा पुग्दा जम्मा ९ वटा म्याज हुन्छ ।
यस पटक पुरस्कार राशि बढाइएको भन्ने छ, कति छ ?
पुरस्कारको व्यवस्था सहारा पोखराले नै गर्छ । हरेक वर्ष पुरस्कारहरु पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । कुन वर्ष कति दिने भनेर उहाँ (सहारा पोखराका अधिकारी) हरुले नै निर्णय गर्नुहुन्छ । यस वर्ष विजेताले १० लाख १ हजार र उपविजेताले ५ लाख १ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्तालाई २५ हजार तथा उत्कृष्ठ गोलरक्षक, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड तथा प्रशिक्षकलाई समेत जनही १५ हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक खेलको म्यान अफ दी म्याचलाई समेत पाँच हजार पुरस्कार दिइन्छ ।
प्रतियोगितामा जति पनि ट्रफी आवश्यक हुन्छ, त्यो सबै सहारा यूकेले प्रायोजन गर्नेछ । सहारा यूकेले सहारा पोखरालाई सपोर्ट वा स्पोन्सर भने पनि सन् २००९ बाट दिँदै आएको छ । ट्रफीहरु यूकेबाट नै लाने गरेका छौं । यूकेबाटै ट्रफीहरु लान समस्या हुन्छ । त्यसो भएपछि बीचमा ट्रफीहरु नेपालबाटै प्रोभाइड गर्ने बरु सहारा यूकेले नगद उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि आयो । तर, पनि ट्रफीको क्वालिटीको कुरा आउँछ । बेलायतको अलि राम्रो हुन्छ । बरु लैजाने कुरामा मिलाउँला भनेर २००९ बाट लाने गरेका छौं । हरेक दिनको खेल र फाइनलमा वेस्ट प्लेयर, अफिसियलहरु सबैलाई दिइने ट्रफीहरु हामीले बेलायतबाट नै प्रोभाइड गर्छौं । त्यसमा नगद पुरस्कारको कुरा पनि आउँछ । हरेक दिन म्यान अफ दी म्याचलाई हामीले ५ हजार रुपैयाँ दिन्छौं भने फाइनलमा म्यान अफ दि म्याच हुनेलाई १० हजार रुपैयाँ दिन्छौं । फाइनलमा सहभागी २० देखि ३० जना खेलाडीलाई मेडल पनि सहारा यूकेले उपलब्ध गराउँछ ।
पहिले त सहारा यूकेबाट पनि खेलाडी पोखरा जान्थे, कसरी रोक्यो ? सहारा यूकेको टिम सकेसम्म हरेक वर्ष लाने हो । गएको वर्ष लग्यौं । धेरै वर्ष अगाडि पनि लगेका थियौं । पोखरा लगेर यहाँ (बेलायत) का युवाहरुलाई समावेश गरायौं । हरेकमा फाइनान्सकै कुरा आउँछ । एलेभेन साइट हो, कम्तीमा २० खेलाडी त जानै प¥यो । उनीहरुको प्लेन टिकेट, लजिङ, फुडिङ सबै सहारा यूकेले नै गर्नुपर्छ । बजेटकै कारण हामीले नेपालमा खेलाडी लैजाने कुरालाई निरन्तरता दिन नसकेको हो । खेलाडी नभएर होइन ।
आहा रारा गोल्डकपका लागि ट्रफी, मेडल, नगदसहित कति राशिको पुरस्कार जाने गर्छ हरेक वर्ष ?
सहयोग गइराखेको हुन्छ । नगद पुरस्कार र ट्रफीभन्दा पनि जति सदस्यहरु हुनुहुन्छ सहाराको । उहाँहरु नै नेपालमा गएर फिजिकल्ली सहयोग गर्नु नै ठूलो कुरा हो । हामीले सहारा यूकेबाट गर्ने सानो सहयोग हो । सहारा पोखराले अहिले १८ औं संस्करणको आहा रारा गोल्डकप गर्दै छ । सहारा क्लबले सपोर्टहरु नेपालमै पाइरहेको छ । मेन स्पोन्सर नै आहा रारा चाउचाउ हो । त्यस्ता थुप्रै प्रायोजक सहारा क्लब पोखराले लिइराखेको छ ।
स्पोन्सर पाउनका लागि पनि जेनुन कुरा हुनुपर्छ । जुन प्रतियोगिता गर्नका लागि सहारा पोखरा तीन/चार महिनादेखि नै तयारीमा लाग्नुहुन्छ । त्यो गोल्डकपबाट फाइदा रकम कहाँ जान्छ भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा भएकोले स्पोन्सर पाइरहनु भएको देख्छु । गोल्डकपबाट बचत रकम सहारा एकेडेमीमा रहेका २४ जना बालबालिकालाई जान्छ । उनीहरुको लजिङ, फुडिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा जाने भएकोले यो टुर्नामेन्ट किन भन्ने सबैले बुझिसक्नुभएको छ ।
यसपटक सहारा यूकेबाट को को सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ?
म फस्ट मार्चमा जाँदैछु । उपाध्यक्ष गइसक्नुभयो । महासचिव धनु थकाली नेपालमै हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालमा हुनुभएर एकदमै सजिलो भइराखेको छ । अरु सल्लाहकार, सदस्यहरु थुप्रै जाँदै हुनुहुन्छ । कार्यसमितिकाहरु प्रायः सबै नै जान्छन् । गत वर्ष जति नभए पनि २० जनाभन्दा कम हुँदैन ।
यो गोल्डकपका लागि बेलायतवासी नेपालीबाट यहाँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
यही टुर्नामेन्टको सहयोगार्थ सहारा यूकेले वार्षिक च्यारिटी कार्यक्रम गर्छ । त्यहाँबाट उठेको रकम खर्च कटाएर सबै सहारा क्लब पोखरालाई दिने हो । त्यहाँ दिनु भनेको सहारा एकेडेमीमा रहेका नानीहरुलाई दिनु हो । सहारामा अहिले २४ जना नानीहरुको खाना, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि दिने हो । सहारा यूकेले वार्षिक च्यारिटीबाट धेरै फन्ड रेइज गरिसकेको अवस्था छ । त्यो फन्ड १८ औं आहा रारा गोल्डकपमा दिँदैछौं ।
थप्न चाहन्छु, सहारा पोखराको अक्षय कोषको लागि गएको अक्टोबर २०१९ मा उपाध्यक्ष ले.रि. कुसाङ गुरुङ र म आफैंले दौडमा सहभागी भयौं । त्यसबाट पनि ५ लाख रुपैयाँ थप भएको छ । सहाराको च्यारिटी र दौडका लागि यूकेवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनीले मद्दत दिनुभयो । त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । च्यारिटी र दौडबाट संकलन भएको र केही कार्यकारी समितिले जम्मा गरेकोसहित झन्डै १४ लाख रुपैयाँ सहारा यूकेको तर्फबाट आहा रारा गोल्डकपको फाइनल म्याचमा हस्तान्तरण गर्दैछौं ।